GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
GỤỌ Baịbụl n’iri asụsụ ise, gụọkwa akwụkwọ ndị ọzọ e ji amụ Baịbụl n’ihe karịrị narị asụsụ ise.
LEE fim ndị ogbi n’ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ iri asụsụ asaa ndị ogbi na-asụ.
CHỌỌ ihe n’ọtụtụ asụsụ.
GEE ihe nkiri ndị si na Baịbụl.
LEE ihe e sere ese e ji akọwa akụkọ ndị dị na Baịbụl.
LEE ihe nkiri na fim ndị ga-enyere gị aka idi nsogbu.
DANLODUO akwụkwọ, magazin, na ihe ndị a na-egere egere n’akwụghị ụgwọ.
Jiri Ọ́bá Akwụkwọ Anyị NKE DỊ N’ỊNTANET MEE NCHỌNCHỌ. Ị ga-enweta ihe ị na-achọ n’ihe karịrị narị asụsụ.
MAKA NDỊ DI NA NWUNYE
“M chọrọ ka mụ na nwunye m na-ebi n’udo. Anyị na-esekarị okwu. Ihe bịakwara ka njọ mgbe anyị mụtara ụmụ. Anyị chọrọ ihe ga-enyere anyị aka ịna-ebi n’udo”
“A ga-eji amamihe wulite ezinụlọ, a ga-ejikwa nghọta mee ka o guzosie ike.”—Ilu 24:3.
IHE NDỊ GA-ABARA GỊ URU
Ị gaa n’ebe a na-akpọ “Ndị Di na Nwunye na Ndị Nne na Nna,” ị ga-ahụ ọtụtụ ihe ga-enyere gị aka. Dị ka:
Ịlafere afọ mbụ nke alụmdi na nwunye
Gị na ndị ọgọ gị ma ọ bụ nne na nna di gị imekọ ihe
(Gaa n’ebe e dere IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI pịa ebe e dere NDỊ DI NA NWUNYE NA NDỊ NNE NA NNA)
N’akwụkwọ bụ́ Isi Ihe Na-akpata Obi Ụtọ Ezinụlọ, e nwere ọtụtụ isiokwu ga-abara di na nwunye uru. Ihe ụfọdụ a tụlere na ya bụ otú mmadụ ga-esi kwadebe maka alụmdi na nwunye na otú ndị lụrụ di na nwunye ga-esi elekọta nne na nna ha ndị merela agadi.
(Akwụkwọ a dịkwa n’adres Ịntanet anyị, ya bụ, www.jw.org/ig. Gaa n’ebe e dere IHE NDỊ ANYỊ NWERE pịa ebe e dere AKWỤKWỌ NA BROSHỌ)
“Ahụrụ m ụmụ m n’anya. Achọrọ m ka ha bụrụ ndị m ga-eji na-eme ọnụ ma ha too”
“Zụlite nwata dị ka ụzọ kwesịrị ya si dị; ọbụna mgbe o mere okenye, ọ gaghị ahapụ ya.”—Ilu 22:6.
Ị gaa n’ebe e dere “Ụmụaka,” ị ga-ahụ ma fim ma ihe ndị e sere ese ma ihe ndị ọzọ ị ga-eji kụziere ụmụ gị ka ha . . .
bụrụ ndị obiọma
na ụmụaka ibe ha na-adị ná mma
mụta otú ha ga-si na-ekele onye meere ha ihe ọma
(Gaa n’ebe e dere IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI pịa ebe e dere ỤMỤAKA)
N’akwụkwọ bụ́ Akwụkwọ M nke Akụkọ Bible nakwa akwụkwọ bụ́ Mụta Ihe Site n’Aka Onye Ozizi Ukwu Ahụ, e sere ihe ndị ga-enyere gị aka ịkụziri ụmụ gị ihe dị na Baịbụl.
(Akwụkwọ abụọ ahụ dịkwa n’adres Ịntanet anyị, ya bụ, www.jw.org/ig. Gaa n’ebe e dere IHE NDỊ ANYỊ NWERE pịa ebe e dere AKWỤKWỌ NA BROSHỌ)
MAKA NDỊ NA-ETO ETO
“M ga-achọ aro ndị ga-enyere m aka ịna-eme nke ọma n’ụlọ akwụkwọ nakwa ịna-erubere mama m na papa m isi. M chọkwara ịma otú m ga-esi mete ezigbo ndị enyi. Abụghịzi m nwata a ga na-agwa ihe ọ bụla ọ ga-eme”
‘Ka obi na-atọ gị ụtọ n’oge ị bụ okorobịa.’—Ekliziastis 11:9.
N’ebe e dere “Ndị Na-eto Eto,” e nwere fim na ọtụtụ isiokwu ndị ga-enyere gị aka ma ọ bụrụ na . . .
owu na-ama gị
o nwere ihe na-enye gị nsogbu n’ụlọ akwụkwọ
i meela ihe a sị gị emela n’ụlọ unu
o nwere ndị na-achọ gị okwu ma ọ bụkwanụ na a na-egwusa gị egwuregwu iberiibe
(Gaa n’ebe e dere IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI pịa ebe e dere NDỊ NA-ETO ETO)
Akwụkwọ bụ́ Ajụjụ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ—Azịza Ndị Na-adị Irè nke mbụ na nke abụọ zara iri ajụjụ asaa na asaa dị mkpa ndị na-eto eto na-ajụkarị.
MAKA NDỊ CHỌRỌ ỊMA IHE BAỊBỤL NA-EKWU
“M chọrọ ịma ihe Baịbụl na-ekwu. Ebee ka m ga-ebido?”
“Akwụkwọ Nsọ dum si n’ike mmụọ nsọ Chineke, ọ bara uru iji ya zie ihe.” —2 Timoti 3:16.
E dere Baịbụl Nsọ—Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ otú ọ ga-adịrị onye ọ bụla mfe ọgụgụ.
(Gaa n’ebe e dere IHE NDỊ ANYỊ NWERE pịa ebe e dere BAỊBỤL)
A zara ọtụtụ ajụjụ n’ebe e dere “Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara.” Ụfọdụ n’ime ha bụ “Ọ̀ bụ Chineke na-akpata nsogbu ụwa?” “Jizọs ọ̀ bụ Chineke Onye pụrụ ime ihe niile?”
(Gaa n’ebe e dere IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI pịa AJỤJỤ NDỊ BAỊBỤL ZARA)
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na mmadụ mụwa Baịbụl n’anaghị gị ego, gaa n’ebe e dere “Gwa Anyị Ka Anyị na Gị Mụwa Baịbụl” ka ị hụ ihe ị ga-eme.
(Gaa n’isimbido pịa ebe e dere “Gwa Anyị Ka Anyị na Gị Mụwa Baịbụl”)
Otu nwaanyị aha ya bụ Christina kwuru, sị: “M kwụsịrị ịgụ Baịbụl maka na anaghị m aghọta ya. Ma, mgbe m malitere ịmụ akwụkwọ bụ́ ‘Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi?’ m bịara ghọtawa ihe Baịbụl na-ekwu.”
È NWERE IHE NA-EDOGHỊ GỊ ANYA BANYERE NDỊÀMÀ JEHOVA?
Ị gaa n’ebe e dere “Ajụjụ Ndị Mmadụ Na-ajụkarị,” ị ga-ahụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụkarị gbasara Ndịàmà Jehova. Ị ga-ahụ ajụjụ ndị dị ka “Gịnị mere unu ji ezi ndị chọọchị ọzọ ozi ọma?” nakwa “Olee otú unu si enweta ego unu ji arụ ọrụ unu?”
(Gaa n’ebe e dere GBASARA ANYỊ pịa ebe e dere AJỤJỤ NDỊ MMADỤ NA-AJỤKARỊ)
Kwa ụbọchị, ihe dị ka narị puku mmadụ asaa na-aga n’ebe anyị na-edebe ihe n’Ịntanet bụ́ jw.org. Gbalịa na-aga ebe ahụ.